Siyamu hlephula isilungu uKhuzani – AMABHINCA
Siyamu hlephula isilungu uKhuzani
Ziyanda iziqutshana la isikhondla khondla kwezomculo umfoka Mpungose eshaya udaka uma ethi uzama ukubhala isilungu. Le nsizwa yawuqeda umatikuletsheni kodwa akubonakali ngoba isilungu sayo sibuye sibaleke. "Kujwayeleke ukuthi isilungu sikushiye uma usikhuluma."
"Le nsizwa isibheda ngisho ibhala phansi. Mhlawumbe kusamele ngivule iMaskandi School of English ngifundise abaculi bakithi isilungu ngoba kuvela amahlazo ikakhulu uma sekumele beyokhuluma lolu limi komabona kude." Kubeka Ibhinca elifundile lakoDube eMvoti.
"Empeleni akuyena yedwa uKhuzani onale nkinga. Uzokhumbula ukuthi le ndaba yaqalwa Ezebhova mhla zivela kweminye yemidlalo kumabona kude zibhacaza isilungu zahlekwa kwaze kwahleka ngisho uhlanya. Kuyisifiso sami ukubona lento iphela kule ndima yomculo ngoba ingenye yezinto ezenza sibukelwe phansi."
PreviousUmubango ezibiza ngeBhova uLusanda
NextLizoqoqa konke okwakubo Ibhova elincane